Umsebenzi kaNkulunkulu phakathi kwabantu ungehlukaniswe nomuntu uqobo, ngoba umuntu uyinjongo yomsebenzi Wakhe, futhi nguye kuphela isidalwa esenziwe uNkulunkulu esingafakaza kuNkulunkulu. Impilo yomuntu kanye nayo yonke imisebenzi yomuntu akunakwehlukaniswa noNkulunkulu, futhi konke kulawulwa izandla zikaNkulunkulu, futhi kungaze kuthiwe akekho umuntu ophila engancikanga kuNkulunkulu. Akekho umuntu ongakuphika lokhu, ngoba kuyiqiniso. Konke okwenziwa uNkulunkulu ukwenzela ukuthi kuzuze isintu, futhi kuqondiswe emaqhingeni kaSathane. Konke okudingwa umuntu kuvela kuNkulunkulu, futhi uNkulunkulu uwumthombo wempilo yomuntu. Ngakho, umuntu akakwazi ukuqhela kuNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu akakaze abe nenhloso yokuqhela kumuntu. Umsebenzi owenziwa uNkulunkulu uwenzela isintu sisonke, futhi imicabango Yakhe ihlala inomusa. Ngakho kumuntu, umsebenzi kaNkulunkulu kanye nemicabango kaNkulunkulu (okuyintando kaNkulunkulu) kokubili “kuyimibono” okumele yaziwe umuntu. Imibono enjalo iphinde ibe ngukuphatha kukaNkulunkulu, futhi umsebenzi ongenziwe umuntu. Izimfuneko uNkulunkulu azenza kumuntu ngenkathi enza umsebenzi Wakhe, khona manjalo, zibizwa ngokuthi “ukwenza” komuntu. Imibono iwumsebenzi kaNkulunkulu uqobo, noma iyintando Yakhe ngesintu noma izinhloso kanye nokubaluleka koMsebenzi Wakhe. Kungaphinde kuthiwe imibono iyingxenye yokuphatha, ngoba lokhu kuphatha kungumsebenzi kaNkulunkulu, futhi kuqondiswe kumuntu, okusho ukuthi lokho kuwumsebenzi owenziwa uNkulunkulu kumuntu. Lo msebenzi uwubufakazi kanye nendlela umuntu azi ngayo uNkulunkulu, futhi usemqoka kumuntu. Uma, esikhundleni sokunaka ulwazi lomsebenzi kaNkulunkulu, abantu benaka izimfundiso ngokukholwa kuNkulunkulu kuphela, noma imininingwane engatheni nengabalulekile, kusho ukuthi ngeke baze bamazi uNkulunkulu, futhi, phezu kwalokho, ngeke baze bakulangazelele ukuthandwa nguNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu uwusizo olukhulu kakhulu olwazini lomuntu ngoNkulunkulu, futhi ubizwa ngokuthi imibono. Le mibono iwumsebenzi kaNkulunkulu, intando kaNkulunkulu, futhi izinhloso nokubalulekile emsebenzini kaNkulunkulu; konke kuwusizo kumuntu. Ukwenza kusho lokho okumele kwenziwe umuntu, lokho okumele kwenziwe izidalwa ezilandela uNkulunkulu. Kuphinde kube wumsebenzi womuntu. Okumele kwenziwe umuntu akusiyo into eyayiqondwa umuntu kusukela ekuqaleni, kodwa yilokho okudingekayo uNkulunkulu akwenza kumuntu ngeNkathi enza umsebenzi Wakhe. Lezi zidingo ziye ngokuya zijula futhi ziphakama ngenkathi uNkulunkulu esebenza. Isibonelo, ngeNkathi Yomthetho, kwakumele umuntu alandele umthetho, futhi ngeNkathi Yomusa, umuntu kwadingeka ukuthi athwale isiphambano. INkathi Yombuso yehlukile: Okudingeka kumuntu kungaphezu kwalokho okwakudingeka ngeNkathi YoMthetho NangeNkathi Yomusa. Ngenkathi imibono ikhushulwa, okudingeka kumuntu kuba sezingeni eliphakeme, futhi kuba sobala kakhulu futhi kube ngokwempela. Kanjalo, imibono iba yinto yangempela kakhulu. Le mibono yangempela eminingi idala ukuthi umuntu alalele uNkulunkulu kuphela, kodwa, phezu kwalokho, yakha ulwazi lwakhe ngoNkulunkulu.
Uma kuqhathaniswa nezinkathi ezedlule, umsebenzi kaNkulunkulu ngeNkathi Yombuso uyinto engenzeka kalula, uqondiswe kakhulu engqikithini yomuntu kanye nasekuguquleni isimo sakhe, futhi ukwazi kangcono ukuba wufakazi kaNkulunkulu uqobo kubo bonke abamlandelayo. Ngamanye amazwi, ngeNkathi Yombuso, njengoba esebenza, uNkulunkulu uziveza kakhulu kumuntu ngaphezu kwalokho ake wakwenza ngaphambilini, okusho ukuthi imibono okumele yaziwe ngabantu iphakeme kakhulu kuneyesikhathi sangaphambili. Ngenxa yokuthi umsebenzi kaNkulunkulu kubantu ungene endaweni okungakaze kungenwe kuyo, imibono eyaziwa abantu ngeNkathi Yombuso iphakeme kunawo wonke umsebenzi wokuphatha. Umsebenzi kaNkulunkulu sewungene endaweni okungakaze kungene kuyo, ngakho imibono eyaziwa abantu seyibe yimibono ephakeme kunayo yonke, futhi ukwenza kwabantu okuvele ngayo nakho kuphakeme kunesikhathi sangaphambili, ngoba ukwenza komuntu ziguquka ngezigaba nemibono, futhi ukulungisiswa kwemibono nakho kuveza ukulungisiswa kwalokho okudingeka kumuntu. Kuzothi lapho konke ukuphatha kukaNkulunkulu sekufika lapho kuma khona, kanjalo nezenzo zomuntu zizokuma, futhi ngaphandle komsebenzi kaNkulunkulu, umuntu uzophoqeleka ukuthi agcine imfundiso yesikhathi sakudala, kungenjalo uyophelelwa umgodi wokucasha. Ngaphandle kwemibono emisha, akuzukuba khona zenzo ezintsha ezizokwenziwa umuntu, ngaphandle kwemibono ephelele, akuzukuba khona zenzo ezilungisisiwe ezizokwenziwa umuntu; ngaphandle kwemibono ephakeme, akuzukuba khona zenzo eziphakeme ezenziwa umuntu. Ukwenza komuntu kuguquka nezinyathelo zikaNkulunkulu, futhi, kanjalo, ulwazi kanye nalokho umuntu abhekana nakho kuguquka ngokomsebenzi kaNkulunkulu. Noma ngabe umuntu ukwazi ukwenza kangakanani, kodwa akehlukaniseki noNkulunkulu, futhi uma uNkulunkulu engase ayeke ukusebenza nje isikhashana, umuntu angafa ngaso leso sikhathi ngenxa yolaka Lwakhe. Umuntu akanalutho angakloloda ngalo, ngoba noma lungaphakama kangakanani ulwazi lomuntu namuhla, noma lunganzulu kangakanani ngalokho adlule kukho ngaphambilini, lungehlukaniseke nomsebenzi kaNkulunkulu—ngoba ukwenza komuntu, kanye nalokho okumele akufune ekukholweni kwakhe kuNkulunkulu, kungehlukaniswe nemibono. Kuzo zonke izinyathelo zomsebenzi kaNkulunkulu kunemibono okumele umuntu ayazi, futhi, okulandelayo, kufunwa izinto ezifanele kumuntu. Ngaphandle kwale mibono njengesisekelo, umuntu ubengeke akwazi ukwenza lutho, noma ubengeke umuntu akwazi ukulandela uNkulunkulu ngokungangabazi. Uma umuntu engamazi uNkulunkulu noma engayiqondi intando kaNkulunkulu, konke okwenziwa umuntu kuyize, futhi bekungeke kukwazi ukugunyazwa uNkulunkulu. Noma ngabe iziphiwo zomuntu ziningi kangakanani, nalapho angehlukaniswe nomsebenzi kaNkulunkulu kanye nokuholwa uNkulunkulu. Ngisho kungakuhle kangakanani noma kungaba kuningi kangakani ukwenza komuntu, ngeke kukwazi ukuthatha indawo yomsebenzi kaNkulunkulu. Ngakho, ayikho nhlobo indlela ukwenza komuntu okungahlukaniswa ngayo nemibono. Labo abangayemukeli imibono emisha abanakho ukwenza okusha. Ukwenza kwabo akuhlobene neqiniso ngoba kulandela izimfundiso futhi kugcina umthetho ofile; akunamibono emisha nhlobo, futhi ngenxa yalokho, akwenzi lutho ngalokho okwenzeka enkathini entsha. Balahlekelwe imibono, futhi ngokwenza njalo balahlekelwe umsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi balahlekelwe iqiniso. Labo abangenalo iqiniso bayinzalo yento engasile, bayisiqu sikaSathane. Noma ngabe umuntu uwuhlobo luni lomuntu, ngeke akwazi ukungabi nemibono yomsebenzi kaNkulunkulu, futhi ngeke ancishwe ubukhona bukaMoya oNgcwele; lapho nje umuntu elahlekelwa imibono, wehlela eHayidesi ngaleso sikhathi futhi aphile ebumnyameni. Abantu abangenayo imibono yilabo abalandela uNkulunkulu ngobuwula, bayilabo abangenawo umsebenzi kaMoya oNgcwele futhi baphila esihogweni. Abantu abanjalo abalilandeli iqiniso, futhi balengisa igama likaNkulunkulu njengophawu nje. Labo abangawazi umsebenzi kaMoya oNgcwele, abangamazi uNkulunkulu osesimweni somuntu, abangazazi izigaba ezintathu zomsebenzi kukho konke ukuphatha kukaNkulunkulu - abayazi imibono, ngakho abanalo iqiniso. Futhi ngabe labo abangenalo iqiniso abayibo abenzi bobubi? Labo abazimisele ngokwenza iqiniso, abazimisele ngokufuna ulwazi ngoNkulunkulu, ababambisene noNkulunkulu bangabantu imibono eyisisekelo sabo. Bamukelwe uNkulunkulu ngoba basebenzisana noNkulunkulu, futhi yilokhu kusebenzisana okumele kwenziwe ngumuntu.
Lokho okubandakanya imibono ikakhulu kusho imisebenzi kaNkulunkulu uqobo, futhi lokho kubandakanya ukwenza okumele kwenziwe umuntu, futhi akuhlangene nhlobo noNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu uqedelwa uNkulunkulu qobo, futhi ukwenza komuntu kufezwa umuntu uqobo. Lokho okumele kwenziwe uNkulunkulu uqobo akudingeki ukuthi kwenziwe umuntu, futhi lokho okumele kwenziwe umuntu akuhlangene noNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu uyinkonzo Yakhe yedwa, futhi ayihlangene nomuntu. Lo msebenzi akudingeke ukuthi wenziwe umuntu, futhi, phezu kwalokho, umuntu angeke akwazi ukwenza umsebenzi owenziwa uNkulunkulu. Lokho okudingeka ukuthi kwenziwe umuntu kumele kufezwe umuntu, ngisho noma kungaba ukunikela ngempilo yakhe, noma ukuzihambisa kuSathane ukuze abe wufakazi - lokhu kumele kufezwe umuntu. UNkulunkulu uqobo uqedela wonke umsebenzi okumele awenze, futhi lokho okumele kwenziwe umuntu uyakukhonjiswa, kuthi umsebenzi osele usalele umuntu. UNkulunkulu akawenzi umsebenzi wokwengeza. Wenza umsebenzi Wakhe kuphela, futhi ukhombisa umuntu indlela kuphela, futhi wenza umsebenzi wokuvula indlela, akawenzi umsebenzi wokuphendla indlela; lokhu kumele kuqondwe umuntu. Ukwenza iqiniso kusho ukwenza amazwi kaNkulunkulu, futhi lokhu kuwumsebenzi womuntu, futhi yikho okumele kwenziwe umuntu, futhi akuhlangene nhlobo noNkulunkulu. Uma umuntu ephoqa ukuthi uNkulunkulu ahlupheke futhi acwenge iqiniso, ngendlela efana neyomuntu, umuntu usuka enza ukungalaleli. Umsebenzi kaNkulunkulu ukwenza inkonzo Yakhe, futhi umsebenzi womuntu ukuhlonipha ukuhola kukaNkulunkulu, ngaphandle kokuphikisa. Lokho okumele umuntu afinyelele kukho kumele kwenzeke, ngisho noma uNkulunkulu esebenza noma ephila ngayiphi indlela. NguNkulunkulu uqobo kuphela ongadinga okuthile kumuntu, okusho ukuthi, uNkulunkulu uqobo okufanele afune okuthile kumuntu. Umuntu kumele angabi nokunye angakwenza, kumele angenzi lutho olunye ngaphandle kokuthoba nokwenza ngokuphelele; yilo mqondo umuntu okumele abe nawo. Uma umsebenzi okumele wenziwe uNkulunkulu uqobo usuphelele, kudingeka umuntu adlule kuwo, isinyathelo ngesinyathelo. Uma, ekugcineni, kuthi sekuqedwe wonke umsebenzi wokuphatha kaNkulunkulu, umuntu engakakakwenzi lokho okudingwa uNkulunkulu, kuyofuneka ukuthi umuntu ajeziswe. Uma umuntu engagcwalisi lokho okudingwa uNkulunkulu, lokhu kuyobe kungena yokungalaleli komuntu, akusho ukuthi uNkulunkulu akawenzisisanga umsebenzi Wakhe. Bonke labo abehluleka ukwenza amazwi kaNkulunkulu, labo abehluleka ukugcwalisa okudingwa uNkulunkulu, kanye nalabo abehluleka ukwethembeka nokufeza umsebenzi wabo—bayojeziswa bonke. Namuhla, okudingeka ukuthi ukufeze akusikho okungeziwe, kodwa umsebenzi womuntu, futhi yilokho okumele kwenziwe ngabantu bonke. Uma wehluleka nawukwenza umsebenzi wakho, noma ukuwenza kahle, awuzibizeli yini izinkinga? Awuzimemeli ukufa? Usangalindela kanjani ikusasa nempumelelo? Umsebenzi kaNkulunkulu wenzelwe isintu, futhi ukusebenzisana komuntu kwenzelwe ukuphatha kukaNkulunkulu. Emuva kokuba uNkulunkulu esenze konke okumele akwenze, umuntu kusadingeka ukuthi angaphazami kokwakhe ukwenza, futhi asebenzisane noNkulunkulu. Emsebenzini kaNkulunkulu, umuntu kumele angashiyi lutho, kumele azinikele ngokwethembeka, futhi angabi nemicabango eminingi, noma ahlale dekle alindele ukufa. UNkulunkulu angazinikela ngenxa yomuntu, pho kungani umuntu ehluleka ukwethembeka kuNkulunkulu? UNkulunkulu unhliziyo-nye futhi umqondo-munye nomuntu, pho kungani umuntu engeke asebenzisane naye kancane? UNkulunkulu usebenzela isintu, pho kungani umuntu ehluleka ukwenza omunye umsebenzi wakhe ngenxa yokuphatha kukaNkulunkulu? Umsebenzi kaNkulunkulu sewuhambe wafika lapha, kodwa usabuka kodwa ungenzi lutho, uyezwa kodwa awunyakazi. Abantu abanjalo abafanele ukulahlwa? Ngoba uNkulunkulu usenikele ngakho konke okwakhe kubantu, pho kungani, namuhla, umuntu ehluleka ukwenza umsebenzi wakhe ngokuzinikela? NgokukaNkulunkulu, umsebenzi wakhe yiwo oseqhulwini, futhi umsebenzi wokuphatha Kwakhe usemqoka. Ngokomuntu, ukwenza amazwi kaNkulunkulu nokugcwalisa lokho okudingwa uNkulunkulu yikho okuseqhulwini kuye. Kumele nonke nikuqonde lokhu. Amazwi akhulunywe kuwe afinyelele emongweni wengqikithini yakho, futhi umsebenzi kaNkulunkulu ufike ezingeni elingakaze libe khona. Abantu abaningi namanje abakaliqondi iqiniso noma ukulahlekisa kwale ndlela; basalindele futhi basabuka, futhi abawenzi umsebenzi wabo. Kunalokho, bahlola igama ngalinye kanye nezenzo zikaNkulunkulu, futhi bagxila kulokho aAkudlayo nakugqokayo, futhi ukucabanga kwabo kuba kubi kakhulu. Ngabe laba bantu abazikhathazi ngento engekho? Kungenzeka kanjani ukuthi abantu abanje kube yilabo abafuna uNkulunkulu? Futhi bangaba kanjani yilabo abanenhloso yokuthobela uNkulunkulu? Ukwethembeka nomsebenzi wabo abakubeki phambili emiqondweni yabo, kunalokho bagxila ekutheni uNkulunkulu ukuphi. Bayathukuthelisa! Ukuba umuntu usekuqondile okumele akuqonde, futhi usenze konke okumele akwenze, nakanjani uNkulunkulu uyobeka isibusiso Sakhe kumuntu, ngoba lokho akudingayo kumuntu kuwumsebenzi womuntu futhi kumele kwenziwe umuntu. Uma umuntu engakwazi ukuqonda okumele akuqonde, futhi engakwazi ukwenza okumele akwenze, umuntu uyojeziswa. Labo abangasebenzisani noNkulunkulu bayizitha zikaNkulunkulu, labo abangawamukeli umsebenzi omusha baphikisana nawo, yize labo bantu bengenzi lutho kusobala ukuthi bayaphikisana nakho. Bonke labo abangalenzi iqiniso elidingwa uNkulunkulu bangabantu abaphikisana nalo ngenhloso futhi abangawahloniphi amazwi kaNkulunkulu, noma ngabe labo bantu “bagxila ngokukhethekile” emsebenzini kaMoya oNgcwele. Abantu abangawalaleli amazwi kaNkulunkulu futhi abangamthobeli uNkulunkulu bayahlubuka, futhi baphikisana noNkulunkulu. Abantu abangawenzi umsebenzi wabo yilabo abangasebenzisani noNkulunkulu, futhi abantu abangasebenzisani noNkulunkulu yilabo abangawamukeli umsebenzi kaMoya oNgcwele.
Uma umsebenzi kaNkulunkulu ufinyelela ezingeni elithile, futhi ukuphatha Kwakhe kufinyelela ezingeni elithile, labo abafuna inhliziyo Yakhe bayehluleka ukufeza okudingwa Nguye. UNkulunkulu ufuna okuthile kumuntu ngokwezilinganiso Zakhe, futhi ngokwalokho umuntu angakwazi ukukufeza. Ngenkathi ekhuluma ngokuphatha Kwakhe, ukhombisa umuntu indlela, futhi uhlinzeka umuntu ngendlela eya ekuphileni. Ukuphatha kukaNkulunkulu kanye nokwenza komuntu kukokubili kusesigabeni esifanayo somsebenzi, futhi kwenziwa kanyekanye. Ukukhuluma ngokuphatha kukaNkulunkulu kuthinta izinguquko esimweni somuntu, futhi ukukhuluma okumele kwenziwe umuntu nezinguquko esimweni somuntu, kuthinta umsebenzi kaNkulunkulu; asikho isikhathi lokhu okubili okungahlukaniswa ngaso. Ukwenza komuntu kuyaguquka, isinyathelo ngesinyathelo. Lokho kudalwa ilokho okudingwa uNkulunkulu kumuntu, futhi umsebenzi kaNkulunkulu uhlala uguquka futhi uqhubekela phambili. Uma ukwenza komuntu kungachezuki ezimfundisweni, lokhu kufakazela ukuthi uncike emsebenzini nasekuholweni uNkulunkulu; uma ukwenza komuntu kungaguquki noma kujula, lokhu kufakazela ukuthi ukwenza komuntu kwenziwa ngokwentando yomuntu, futhi akuyikho ukwenza kweqiniso; uma umuntu engenayo indlela ayilandelayo, lokho kusho ukuthi usewele ezandleni zikaSathane, futhi ubelokhu elawulwa uSathane, okusho ukuthi ulawulwa umoya omubi. Uma ukwenza komuntu kungajuli, umsebenzi kaNkulunkulu awuzukuthuthuka, futhi uma umsebenzi kaNkulunkulu ungaguquki, ukungena komuntu kuzoma, lokhu akunakuguqulwa. Kuwo wonke umsebenzi kaNkulunkulu, uma umuntu ubengahlala elandela umthetho kaJehova, bekuyokusho ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ubungeke uqhubekele phambili, futhi bekungaba nzima ukuqeda le nkathi okuphilwa kuyo. Ukuba umuntu ubelokhu ebambelele esiphambanweni futhi enze ukubekezela nokuthobeka, umsebenzi kaNkulunkulu bewungeke ukwazi ukuqhubekela phambili. Ukuphatha kweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha kungeqedwe phakathi kwabantu abalandela umthetho kuphela, noma ababambelela esiphambanweni nasekwazini ukubekezela nokuthobeka kuphela. Kunalokho, umsebenzi kaNkulunkulu uwonke uphethwa kulabo ezinsukwini zokugcina, abazi uNkulunkulu, futhi abakhululiwe emaketangweni kaSathane, futhi bazikhulula ngokugcwele ethonyeni likaSathane. Lokhu kungukuqonda komsebenzi kaNkulunkulu okungevinjelwe. Kungani kuthiwa ukwenza kwalabo abasemabandleni enkolo sekuhanjelwe isikhathi? Yingoba lokho abakwenzayo akuhlangene nomsebenzi wanamuhla. ENkathini Yomusa, lokho abakwenzayo bekuyikhona, kodwa ngokwedlula kwaleso sikhathi futhi umsebenzi kaNkulunkulu waguquka, ukwenza kwabo kuye ngokuya kuphelelwa yisikhathi. Kushiywe umsebenzi omusha kanye nokukhanya okusha. Ngokubheka isisekelo sawo sokuqala, umsebenzi kaMoya oNgcwele uqhubekele phambili kwezinye ngezinyathelo eziningi ezijulayo. Kodwa labo bantu basabambeke esigabeni sokuqala somsebenzi kaNkulunkulu, futhi babambelele ezenzweni zakudala kanye nokukhanya okudala. Umsebenzi kaNkulunkulu ungaguquka kakhulu kabi eminyakeni emithathu noma emihlanu, ngakho lungebe lukhulu kakhulu uguquko olwenzeke eminyakeni eyizi-2000? Uma umuntu engenakho ukukhanya noma ukwenza okusha, kusho ukuthi usilele emsebenzini kaMoya oNgcwele. Lokhu kuwukwahluleka komuntu; ubukhona bomsebenzi omusha kaNkulunkulu kungephikiswe ngoba, namuhla, labo abebekade benomsebenzi kaMoya oNgcwele basalandela izinqubo eseziphelelwe isikhathi. Umsebenzi kaMoya oNgcwele uhlala uqhubekela phambili, futhi bonke labo abasemgudwini kaMoya oNgcwele kumele baqhubekele phambili bajule futhi baguquke, isinyathelo ngesinyathelo. Akumele lokhu kume esigabeni esisodwa. Yilabo abangawazi umsebenzi kaMoya oNgcwele kuphele abaqhubeka nokwenza umsebenzi wakhe wokuqala, futhi bangawamukeli umsebenzi kaMoya oNgcwele. Yilabo abangalaleli kuphela abehluleka ukuzuza emsebenzini kaMoya oNgcwele. Uma ukwenza komuntu kungahambisani nomsebenzi omusha kaMoya oNgcwele, nakanjani ukwenza komuntu ngeke kuhambisane nomsebenzi wanamuhla, futhi nakanjani akuhambisani nomsebenzi wanamuhla. Labo bantu abasele emuva ngesikhathi yibo abehluleka ukufeza umsebenzi kaNkulunkulu, ingasaphathwa eyokuba ngabantu abayogcina befakazela uNkulunkulu. Umsebenzi wokuphatha uwonke, phezu kwalokho, kumele uphothulwe yileli qembu labantu. Ngoba labo abake bagcina umthetho kaJehova, kanye nalabo abake bahluphekela isiphambano, uma behluleka ukwamukela isigaba somsebenzi wezinsuku zokugcina, kusho ukuthi abakwenzile nje bebekwenzela ize, futhi kuyize leze. Indlela yokuchaza umsebenzi kaMoya oNgcwele ngokucacile ekwamukeleni okwenzeka lapha namanje, beyingabambelele esikhathini sakudala. Labo abangahambisananga nomsebenzi wanamuhla, futhi abangahlukaniswanga nezenzo zanamuhla, bayilabo abaphikisana futhi abangawamukeli umsebenzi kaMoya oNgcwele. Abantu abanjalo baphikisana nomsebenzi kaNkulunkulu wamanje. Yize bebambelela ekukhanyeni kwakudala, lokhu akusho ukuthi bangaphikisana nokuthi abawazi umsebenzi kaMoya oNgcwele. Kungani kube nalezi zingxoxo ezingaka ngokuguquka kokwenza komuntu, komehluko phakathi kokwenza okudala nokwamanje, ngokuthi kwakwenziwa kanjani ngezinkathi zakudala, nokuthi kwenziwa kanjani namuhla? Lokho kwahlukaniswa kokwenza komuntu kuhlala kukhulunywa ngakho ngoba umsebenzi kaMoya oNgcwele uhlala uqhubekela phambili, ngakho ukwenza komuntu kuhlala kudingeka ukuthi kuguquke. Uma umuntu ehlala enamathele esigabeni esisodwa, lokhu kufakazela ukuthi akakwazi ukuhambisana nomsebenzi kaNkulunkulu omusha kanye nokukhanya okusha; akufakazeli ukuthi uhlelo lokuphatha lukaNkulunkulu alukaguquki. Labo abangaphandle kwendlela kaMoya oNgcwele bahlala becabanga ukuthi benza okuyikhona, kube empeleni, umsebenzi kaNkulunkulu okubo waphela kudala, futhi umsebenzi kaMoya oNgcwele awukho kubo. Umsebenzi kaNkulunkulu wadluliseleka kwelinye iqembu labantu kudala, iqembu ayehlose ukuqedela umsebenzi wakhe omusha kulo. Ngoba labo abakwezenkolo bayehluleka ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu omusha, futhi babambelela emsebenzini wakudala, ngakho uNkulunkulu ubalahlile labo bantu, futhi wenza umsebenzi Wakhe omusha kubantu abamukela lo msebenzi omusha. Laba ngabantu abasebenzisana nomsebenzi Wakhe omusha, futhi umsebenzi wokuphatha ungafezeka ngale ndlela kuphela. Ukuphatha kukaNkulunkulu kuhlala kuqhubekela phambili, futhi ukwenza komuntu kuhlala kukhuphukela phezulu. UNkulunkulu uhlala esebenza, futhi umuntu uhlala edinga, ukuze bobabili bafinyelele esicongweni samandla abo, uNkulunkulu nomuntu bamunye ngokugcwele. Lokhu kuyisibonakaliso sokufezwa komsebenzi kaNkulunkulu, futhi umphumela wokugcina wokuphatha kukaNkulunkulu konke.
Esigabeni ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu kukhona izidingo zomuntu ezihambisana nawo. Bonke labo abasemgudwini kaMoya oNgcwele baphethwe ubukhona kanye nokuqondisa kukaMoya oNgcwele, futhi labo abangekho ngaphakathi komgudu kaMoya oNgcwele bangaphansi kokulawula kukaSathane, futhi abanawo umsebenzi kaMoya oNgcwele. Abantu abasemgudwini kaMoya oNgcwele yilabo abamukela umsebenzi omusha kaNkulunkulu, labo ababambisanayo emsebenzini kaNkulunkulu omusha. Uma labo abangaphakathi kwale ndlela behlukeka ukwenza iqiniso elidingwa uNkulunkulu ngalesi sikhathi, bazoqondiswa izigwegwe, futhi okubi kakhulu ukuthi bazolahlwa uMoya oNgcwele. Labo abamukela umsebenzi omusha kaMoya oNgcwele, bazophila ngaphakathi komgudu kaMoya oNgcwele, bamukela ukunakekelwa nokuvikelwa uMoya oNgcwele. Labo abazimisele ngokwenza iqiniso bakhanyiselwa uMoya oNgcwele, futhi labo abangazimisele ngokwenza iqiniso bayaqondiswa uMoya oNgcwele, futhi bangaze bajeziswe. Ngisho noma umuntu unjani, kuncike ekutheni basemgudwini kaMoya oNgcwele, uNkulunkulu uzothwala ijoka labo bonke abamukela umsebenzi Wakhe omusha ngenxa yegama Lakhe. Labo abadumisa igama Lakhe futhi abazimisele ngokwenza amazwi Akhe bazokwamukela izibusiso Zakhe; labo abangamlaleli futhi abangawenzi amazwi Akhe bazokwamukela ukujeziswa Nguye. Abantu abasemgudwini kaMoya oNgcwele yilabo abamukela umsebenzi omusha, futhi njengoba bamukela umsebenzi omusha, kumele basebenzisane noNkulunkluu ngokufanele, futhi kumele bangaziphathisi okwabahlubuki abangawenzi umsebenzi wabo. Yilokhu kuphela okudingwa uNkulunkulu kumuntu. Akunjalo kubantu abangawamukeli umsebenzi omusha: Bangaphandle komgudu koMoya oNgcwele, futhi ukuqondiswa kanye nokukhalinywa uMoya oNgcwele akusebenzi kubo. Usuku lonke, laba bantu baphila enyameni, baphila phakathi kwemiqondo yabo, futhi abakwenzayo nje kususelwa ezifundisweni ezivela ngokucubungula nocwaningo lwemiqondo yabo. Akukhona lokho okudingwa umsebenzi omusha kaMoya oNgcwele, kube kungahambisani noNkulunkulu. Labo abangawamukeli umsebenzi kaNkulunkulu bancishiwe ubukhona bukaNkulunkulu, futhi, phezu kwalokho, bantula izibusiso nokuvikelwa uNkulunkulu. Amazwi abo amaningi kanye nezenzo kubamele ezidingweni zomsebenzi kaMoya oNgcwele; futhi kuyimfundiso, akulona iqiniso. Izimfundiso ezinje kanye nemithetho kwanele ukuba kufakazele ukuthi ukuhlangana kwalaba bantu kuyinkolo nje kuphela; akukhona okukhethiwe, noma injongo yomsebenzi kaNkulukulu. Ukuhlangana kwabo bonke labo abaphakathi kwabo kungabizwa ngokuthi ukuhlanganyela kwezenkolo kuphela, futhi kungebizwe ngokuthi ibandla. Lokhu kuyiqiniso elingaguquleki. Abanawo umsebenzi omusha kaMoya oNgcwele; abakwenzayo kubukeka kunephunga lenkolo, abakuphilayo kugcwele inkolo; abanabo ubukhona kanye nomsebenzi kaMoya oNgcwele, kanti abafanelekile nawukuqondiswa nokukhanyiswa uMoya oNgcwele. Laba bantu bayizidumbu ezingenampilo, futhi bayizimpethu ezingenamoya. Abanalwazi ngokuhlubuka nokuphikisa komuntu, abanalwazi ngezenzo ezimbi zonke zomuntu, bebe bengenalwazi nhlobo ngomsebenzi kaNkulunkulu kanye nentando kaNkulunkulu yamanje. Bonke abanalwazi, abantukazana, bawudoti ongafanele ukubizwa ngabantu abakholwayo! Akukho abakwenzayo okunegalelo ekuphatheni kukaNkulunkulu, kube kungelungise uhlelo lukaNkulunkulu. Amazwi abo kanye nezenzo kunyanyisa kakhulu, kuyadina, futhi akufanelekanga nawukuthi kuze kubalwe. Akukho okwenziwa yilabo abangekho emgudwini kaMoya ONgcwele abahlangene nomsebenzi omusha kaMoya oNgcwele. Ngenxa yalokhu, noma bengaba kuphi, abaqondiswanga uMoya oNgcwele, futhi, phezu kwakho konke, ngaphandle abakhanyiselwanga uMoya oNgcwele. Ngoba bonke bangabantu abangenalo uthando lweqiniso, futhi bayazondwa futhi bachithwe uMoya oNgcwele. Babizwa ngokuthi bangabenzi bobubi ngoba baphila enyameni, futhi benza noma yini ebathokozisayo ngaphansi kwegama likaNkulunkulu. Ngenkathi uNkulunkulu esebenza, abazisondezi Kuye ngamabomu, futhi bagijimela kwelinye icala elingahambisani Naye. Ukwehluleka komuntu ukusebenzisana noNkulunkulu kuwukuhlubuka kuNkulunkulu okukhulu ngokwakho, ngakho ngeke yini abaphikisana noNkulunkulu ngamabomu nakanjani bathole impindiselo ebafanele? Ngokubalwa kokwenza okubi kwalaba bantu, abanye abantu balangazelela ukubaqalekisa, kanti uNkulunkulu uyabaziba. Kumuntu, kubukeka sengathi ukwenza kwabo kuphathelene negama likaNkulunkulu, kuNkulunkulu, abanabo ubudlelwano negama Lakhe noma abanabufakazi Ngaye. Noma bangenzani laba bantu, akuhlangene noNkulunkulu: akuhlangene negama Lakhe kanye nomsebenzi Wakhe wanamuhla. Laba bantu bayazihlaza, futhi babonakalisa uSathane; bangabenzi bobubi abasebenzela usuku lolaka. Namuhla, noma bengenzani, futhi kuncike ekutheni bangaphazamisi ukuphatha kukaNkulunkulu futhi abangahlangene nhlobo nomsebenzi kaNkulunkulu, abantu abanjalo ngeke babhekane nembuyiselo ehambisanayo, ngoba usuku lolaka alukafiki. Kuningi abantu abakholwa ukuthu uNkulunkulu ukube usebhekene nakho, futhi bacabanga ukuthi abenzi bobubi kumele babhekane nempindiselo ebafanele ngokushesha. Kodwa njengoba umsebenzi kaNkulunkulu wokuphatha ungakafiki ekugcineni, futhi nosuku lolaka alukafiki, abangalungile bayaqhubeka nokwenza ukwenza kokungalungi. Abanye bathi, “Labo abasenkolweni abanabo ubukhona noma umsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi bathunaza igama likaNkulunkulu; pho kungani uNkulunkulu engababhubhisi, kunokuba elokhu ekezelela ukuziphatha kwabo okungenakuzithiba?” Laba bantu, ababonakalisa uSathane futhi abaveza inyama, abazi, bangabantu abaphansi, bangabantu abaxakile. Ngeke bakubone ukufika kolaka lukaNkulunkulu ngaphambi kokuba baqonde ukuthi uNkulunkulu uwenza kanjani umsebenzi Wakhe kubantu, futhi uma sebenqotshwe ngokuphelele, labo abenza ububi bazothola impindiselo, futhi akekho noyedwa kubo oyokwazi ukubalekela usuku lolaka. Manje akusona isikhathi sokujeziswa komuntu, kodwa isikhathi sokwenziwa komsebenzi wokunqoba, ngaphandle uma kukhona labo abakhubaza ukuphatha kukaNkulunkulu, lapho beyojeziswa ngokobubi bezenzo zabo. Ngesikhathi sokuphatha isintu kukaNkulunkulu, bonke labo abasemgudwini kaMoya oNgcwele banobuhlobo noNkulunkulu. Labo abazondwayo futhi abachitshwa uMoya oNgcwele baphila ngaphansi kwethonya likaSathane, futhi abakwenzayo akunabudlelwano noNkulunkulu. Yilabo abamukela umsebenzi kaNkulunkulu omusha kuphela, nababambisana noNkulunkulu, abanobudlelwane noNkulunkulu, ngoba umsebenzi kaNkulunkulu ubhekiswe kuphela kulabo abamamukelayo, hhayi bonke abantu, ngisho noma bayawemukela noma cha. Umsebenzi owenziwa uNkulunkulu uhlala ubheke kokuthile, awenzelwa nje ubala. Labo abahambisana noSathane abakulungele ukufakazela uNkulunkulu, futhi abakulungele ukusebenzisana noNkulunkulu.
Isigaba somsebenzi kaMoya oNgcwele ngasinye sidinga ubufakazi bomuntu ngaso leso sikhathi. Isigaba ngasinye somsebenzi siyimpi ephakathi kukaNkulunkulu noSathane, futhi okuliwa nakho uSathane, kube ozolungisiswa ngomsebenzi wakhe kuwumuntu. Ukuthi ngabe umsebenzi kaNkulunkulu ungathela izithelo yini kuncike endleleni umuntu afakazela uNkulunkulu ngayo. Lobu bufakazi yibo obudingwa uNkulunkulu kulabo abamlandelayo; wubufakazi obenziwa phambi kukaSathane, futhi ubufakazi bomthelela womsebenzi Wakhe. Ukuphatha kukaNkulunkulu kukonke kwahlukaniseke izigaba ezintathu, futhi esigabeni ngasinye, kudingeka okufanele leso sigaba kumuntu. Phezu kwalokho, njengoba kuhamba iminyaka futhi iqhubekela phambili, okudingwa uNkulunkulu kumuntu kuyaphakama kakhulu. Ngakho, esigabeni nesigaba, umsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu ufinyelela esicongweni, umuntu aze abone iqiniso “ngokubonakala Kwezwi enyameni,” futhi ngale ndlela okudingeka kumuntu kuphakama kakhulu, futhi okudingeka kumuntu ekufakazeni kuphakama ngaphezu kwalokho. Uma umuntu ekhula emandleni okusebenzisana noNkulunkulu ngokweqiniso, iyakhula indlela adumisa ngayo uNkulunkulu. Ukusebenzisana Naye komuntu kuwubufakazi okudingeka ukuthi abe nabo, futhi ubufakazi anabo buwukwenza komuntu. Ngakho, ukuthi ngabe umsebenzi kaNkulunkulu unomthelela ofunekayo, nokuthi ngabe bukhona ubufakazi bangempela, kuxhunyaniswe kakhulu nokusebenzisana kanye nobufakazi bomuntu. Uma sewuqediwe umsebenzi, okusho ukuthi, uma konke ukuphatha kukaNkulunkulu kufinyelela esiphethweni, umuntu kuzodingeka ukuthi abe nobufakazi obuphakeme kakhulu, futhi uma umsebenzi kaNkulunkulu ufinyelela esiphethweni, ukungena komuntu kufinyelela esicongweni. Phambilini, kwakudingeka ukuthi umuntu ahambisane nomthetho kanye nemiyalelo, futhi kwakudingeka ukuthi abakezele futhi athobeke. Namuhla, kudingeka ukuthi umuntu alalele zonke izinhlelo zikaNkulunkulu futhi abe nothando oluphakeme lukaNkulunkulu, futhi ekugcineni kudingeka ukuthi aqhubeke nokuthanda uNkulunkulu phakathi kokuhlushwa. Lezi zigaba ezintathu zidingwa uNkulunkulu kumuntu, isinyathelo nenesinyathelo, ekuphatheni Kwakhe kukonke. Isigaba ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu sijula ngaphezu kwesokugcina, futhi esigabeni ngasinye okudingeka kumuntu kukhulu kakhulu kunokokugcina, futhi ngale ndlela, ukuphatha kukaNkulunkulu kukonke kuya ngokuya kuhlangana. Isizathu salokhu ukuthi okudingeka kumuntu kuphakeme kakhulu kunesimo somuntu futhi kusondelene nezilinganiso zikaNkulunkulu, futhi yilapho lapho isintu sonke siya ngokuya sisuka ethonyeni likaSathane kuze kube wukuthi, umsebenzi kaNkulunkulu ufinyelela ekupheleni nya, isintu sisonke sizobe sisindile ethonyeni likaSathane. Uma sekufika leso sikhathi, umsebenzi kaNkulunkulu uyobe usufinyelele ekupheleni, futhi ukusebenzisana komuntu noNkulunkulu ukuze afinyelele ekuguqukeni kwesimo sakhe kuyobe kungasekho, futhi isintu sonke siyophila ekukhanyeni kukaNkulunkulu, futhi kusukela lapho, ngeke kusaba khona ukuhlubuka kuNkulunkulu. UNkulunkulu ngeke esafuna lutho kumuntu, futhi kuzoba nokusebenzisana okuhle phakathi komuntu noNkulunkulu, okunye kwakho kuzoba impilo yomuntu noNkulunkulu ngokuzwana, impilo evela emuva kokuba ukuphatha kukaNkulunkulu sekuqedwe nya, futhi nomuntu esesindiswe uNkulunkulu ngokugcwele ekuxhakathisweni nguSathane. Labo abangakwazi ukulandela ezinyathelweni zikaNkulunkulu abakwazi ukuthola lolo hlobo lwempilo. Bazobe sebezehlisele ebumnyameni, lapho beyokhala futhi bagedle amazinyo abo; bangabantu abakholwa kuNkulunkulu kodwa abangamlandeli, abakholwa uNkulunkulu kodwa abangalaleli wonke umsebenzi Wakhe. Njengoba umuntu ekholwa kuNkulunkulu, kumele alandele eduze ezinyathelweni zikaNkulunkulu, isinyathelo nesinyathelo; kumele “alandele iMvana noma ngabe iya kuphi.” Yilaba bantu kuphela abafuna indlela yeqiniso, yibo abazi umsebenzi kaMoya oNgcwele. Abantu abalandela njengezigqila amagama nezimfundiso yilabo abakhishiwe ngumsebenzi kaMoya oNgcwele. Esikhathini ngasinye, uNkulunkulu uzoqala umsebenzi omusha, futhi esikhathini ngasinye, kuzoba nesiqalo esisha kubantu. Uma umuntu elandela iqiniso lokuthi “uJehova nguNkulunkulu” futhi “uJesu nguKristu,” okungamaqiniso asebenza kuphela enkathini eyodwa, umuntu-ke akasoze ahambisana nomsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi uyohlala engakwazi ukuzuza umsebenzi kaMoya oNgcwele. Noma ngabe uNkulunkulu usebenza kanjani, umuntu ulandela ngaphandle kokungabaza, futhi ulandela eduze. Ngale ndlela, umuntu ubengasuswa kanjani uMoya ONgcwele? Noma ngabe wenzani uNkulunkulu, inqobo uma umuntu enesiqiniseko sokuthi umsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi ehambisana nomsebenzi kaMoya oNgcwele ngaphandle kokunqikaza, futhi ezama ukuhlangabezana nezidingo zikaNkulunkulu, pho angajeziswa kanjani? Umsebenzi kaNkulunkulu awukaze ume, izinyathelo zakhe azikaze zime, futhi ngaphambi kokuqeda umsebenzi Wakhe wokuphatha, ubelokhu ematasa, futhi akami. Kodwa umuntu wehlukile: Njengoba ethole ingxenyana yomsebenzi kaMoya oNgcwele, uwuphatha sengathi awusoze waguquka; esethole ulwazi oluncane, akaqhubekeli phambili ukuze alandele ezinyathelweni zomsebenzi kaNkulunkulu omusha; esebone ingxenyana yomsebenzi kaNkulunkulu, ubheka uNkulunkulu ngokushesha njengesithombe esibazwe ngokhuni, futhi ukholwa ukuthi uNkulunkulu uyohlala eyilesi simo asibona phambi kwakhe, ukuthi sasinje kudala futhi siyoba njalo nangesikhathi esizayo; esethole ulwazi olungatheni, umuntu uziqhenya kangangoba uyazikhohlwa futhi aqale ukumemezela ngesimo nobukhona bukaNkulunkulu okungekho nhlobo; futhi eseqinisekile ngesigaba esisodwa somsebenzi kaMoya oNgcwele, noma ngabe wuhlobo luni lomuntu olumemezela umsebenzi omusha kaNkulunkulu, umuntu akawamukeli. Laba ngabantu abangeke bakwazi ukwamukela umsebenzi omusha kaMoya oNgcwele; futhi balukhuni; futhi abakwazi ukwamukela izinto ezintsha. Abantu balolo hlobo bakholwa kuNkulunkulu kodwa abamamukeli uNkulunkulu. Umuntu ukholwa ukuthi ama-Israyeli ayenephutha “ngokukholwa kuJehova bese engakholwa kuJesu,” kodwa abantu abaningi babamba iqhaza kulokhu “ukukholwa kuJehova bachithe uJesu” futhi “balangazela ukubuya kukaMesiya, kodwa baphikisa uMesiya obizwa ngokuthi uJesu.” Akumangazi-ke ukuthi abantu basaphila ngaphansi kukaSathane emuva kokwamukela isigaba esisodwa somsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi abakazitholi izibusiso zikaNkulunkulu. Lokhu akudalwa ukuhlubuka komuntu? AmaKristu emhlabeni jikelele angahambisananga nomsebenzi omusha wanamuhla abambelele enkolweni yokuthi asenhlanhleni, ukuthi uNkulunkulu uzofeza izifiso zabo ngazinye. Nokho abakwazi ukusho baqiniseke ukuthi kungani uNkulunkulu ezobayisa ezulwini lesithathu, futhi abanasiqiniseko ngokuthi uJesu uzobalanda egibele ifu elimhlophe, futhi bengesho nakancane ngokuqiniseka ukuthi uJesu uzofika ngempela na egibele phezu kwefu elimhlophe ngalolo suku abalucabangayo. Bonke balangazele, futhi badidekile; nabo uqobo abazi nokuthi ngabe uNkulunkulu uzothatha omunye nomunye wabo, ingcosane yabantu abehlukene, bakuwo wonke amahlelo. Umsebenzi owenziwa uNkulunkulu manje, inkathi yamanje, intando kaNkulunkulu - abaqondi kutho kulokhu, futhi akukho okunye abangakwenza ngaphandle kokubala izinsuku ngeminwe yabo. Yilabo kuphela abalandela ezinyathelweni zeMvana kuze kube sekugcineni abayokwazi ukuthola izibusiso zokugcina, kanti labo bantu “abahlakaniphile,” abangakwazi ukulandela kuze kube sekugcineni kepha bekholwa ukuthi bakuzuze konke, ngeke bakwazi ukubona ukuvela kukaNkulunkulu. Bonke bakholwa ukuthi bangabantu abakhaliphe kakhulu emhlabeni, futhi bayakunqamula ukuqhubeka kokuthuthukisa umsebenzi kaNkulunkulu ngaphandle kwesizathu, futhi kubukeka sengathi bakholwa ngokugcwele ukuthi uNkulunkulu uzobayisa ezulwini, lapho “abathembeke kuNkulunkulu kakhulu, abalandela uNkulunkulu, abalandela amazwi kaNkulunkulu.” Noma “bethembeke ngokweqile” amazwini akhulunywe uNkulunkulu, amazwi abo nezenzo kusabonakala kunyanyisa kakhulu ngoba kuphikisana nomsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi benza inkohliso nobubi. Labo abangalandeli kuze kube sekugcineni, abasilelayo emsebenzini kaMoya oNgcwele, futhi ababambelela emsebenzini omdala abahlulekanga nje ukugcwalisa ukwethembeka kuNkulunkulu kuphela, kodwa, baphenduke labo abaphikisana noNkulunkulu, baba yilabo abachitha isikhathi esisha, futhi abazojeziswa. Ngabe bakhona abadabukisa ngaphezu kwabo? Abaningi baze bakholwe ukuthi labo abachitha umthetho omdala futhi bamukele umsebenzi omusha abananembeza. Laba bantu, abakhuluma ngonembeza kuphela, futhi bengawazi umsebenzi kaMoya oNgcwele, bazogcina sebenqanyulelwe amathuba okuthuthuka ngobabo onembeza. Umsebenzi kaNkulunkulu awulandeli imfundiso, futhi yize kungumsebenzi Wakhe uqobo, uNkulunkulu akabambeleli kuwo. Lokho okumele kuphikwe kuyaphikwa, lokho okumele kunqunywe kuyanqunywa. Kepha umuntu uzenza isitha sikaNkulunkulu ngokubambelela engxenyeni encane yomsebenzi kaNkulunkulu wokuphatha. Akukhona ukuxaka komuntu lokhu? Akukhona ukungazi komuntu lokhu? Uma abantu belokhu benovalo futhi beqaphele kakhulu ngenxa yokwesaba ukungazitholi izibusiso zikaNkulunkulu, yilapho behluleka khona ukuthola izibusiso ezinkulu, kanye nokuthola isibusiso sokugcina. Labo bantu abalandela umthetho njengezigqila bonke bakhombisa ukwethembeka okukhulu emthethweni, futhi abaveza lokho kwethembeka emthethweni, yibo abangabahlubuki abaphikisana noNkulunkulu. Ngoba manje sekuyiNkathi Yombuso hhayi iNkathi yoMthetho, futhi umsebenzi wanamuhla nomsebenzi wesikhathi esedlule ngeke kufaniswe, futhi umsebenzi wesikhathi esedlule ungeqhathaniswe nomsebenzi wanamuhla. Umsebenzi kaNkulunkulu sewuguqukile, futhi ukwenza komuntu nakho sekuguqukile; akusewona owokubambelela emthethweni noma ukuthwala isiphambano. Ngakho, ukwethembeka kwabantu emthethweni nasesiphambanweni akuzukuthola ukuvunywa uNkulunkulu.
Umuntu uzopheleliswa ngeNkathi Yombuso. Emuva komsebenzi wokunqoba, umuntu uyobhekana nokucwengwa kanye nokuhlupheka. Labo abanganqoba nabangaba ofakazi ngesikhathi sokuhlupheka yibo abagcina sebepheleliswa; baba ngabanqobi. Ngesikhathi senhlupheko, abantu kudingeka ukuthi bamukele ukucwengwa, futhi lokhu kucwengwa kungumsebenzi wokugcina kaNkulunkulu. Kungokokugcina lapho umuntu eyocwengwa ngaphambi kokuphethwa komsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu, futhi bonke labo abalandela uNkulunkulu kumele bamukele ukuvivinywa kokugcina, kumele bamukele ukucwengwa kokugcina. Labo abehlelwe ukuhlupheka abanawo umsebenzi kaMoya oNgcwele kanye nokuholwa uNkulunkulu, kodwa labo abanqotshwe ngempela futhi abafuna uNkulunkulu ngokweqiniso bayogcina bemile bengapheli amandla; yibo abanobuntu, nabathanda uNkulunkulu ngokweqiniso. Noma angenzani uNkulunkulu, labo abanqobayo ngeke bephucwe imibono, futhi bazomela iqiniso balenze ngaphandle kokwahluleka ebufakazini babo. Bayilabo abazophuma ngokuphelele enhluphekweni enkulu. Yize labo abadoba emanzini anyakaziswayo besengathola abangakusebenzele namuhla, akekho umuntu ongakwazi ukubalekela ukuhlupheka kokugcina, futhi akekho ongabalekela ukuvivinywa kokugcina. Kulabo abanqobayo, lokho kuhlupheka kuwukucwengwa okukhulu; kodwa kulabo abadoba emanzini anyakaziswayo, kuwumsebenzi wokunqunywa ophelele. Noma bangalingwa kanjani, ukukhanya kwalabo abanoNkulunkulu ezinhliziyweni zabo kuhlala kungaguqukile; kodwa labo abangenaye uNkulunkulu enhliziyweni yabo, uma umsebenzi kaNkulunkulu ungenalusizo enyameni yabo, baguqula indlela ababheka uNkulunkulu ngayo, futhi baze basuke kuNkulunkulu. Banjalo abangeke bame kuze kube sekupheleni, abafuna izibusiso zikaNkulunkulu kuphela futhi abangalangazeleli ukuzikhandlela uNkulunkulu futhi nokuzinikela Kuye. Laba bantu ababi bayoxoshwa bonke uma umsebenzi kaNkulunkulu sewufika ekugcineni, futhi abafanelwe ukudatshukelwa. Labo abangenabo ubuntu bayehluleka ukuthanda uNkulunkulu ngokweqiniso. Uma isimo siphephile futhi sivikelekile, noma uma bengathola inzuzo, bamlalela ngokuphelele uNkulunkulu, kodwa lapho lokho abakulangazelelayo kuba sengcupheni noma kugcina sekuchithiwe, bajika ngas0 leso sikhathi. Ngisho esikhathini sobusuku obubodwa, bangase baphenduke besuka ekubeni abantu abamoyizelayo, “abenenhliziyo enhle” babe ngabantu ababi nababulali abesabekayo, baphendukele okubasizile izolo kube yisitha sabo esikhulu, ngaphandle kwesizathu. Uma la madimoni engakhishwa, la madimoni angabulala ngaphandle kokungabaza, ngeke abe yingozi efihlakele? Umsebenzi wokusindisa umuntu awufezwa kulandela ukuqedwa komsebenzi wokunqoba. Yize umsebenzi usufike ekugcineni, umsebenzi wokuhlanza umuntu awukafiki lapho; lolo hlobo lomsebenzi luyoqedelwa uma esehlanzwe ngokugcwele, uma labo abazithoba ngokuphelele kuNkulunkulu sebephelelisiwe, futhi uma labo abazenzisayo abangenaye uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo sebesusiwe. Labo abangamanelisi uNkulunkulu esigabeni sokugcina somsebenzi Wakhe bayokhishwa ngokugcwele, futhi labo abakhishwayo bangabakadeveli. Njengoba behluleka ukwanelisa uNkulunkulu, bayahlubuka kuNkulunkulu, futhi yize laba bantu belandela uNkulunkulu namuhla, lokhu akufakazeli ukuthi bayilabo abayogcina bemile. Emazwini athi “labo abalandela uNkulunkulu kuze kube sekugcineni bayothola insindiso,” incazelo “yokulandela” iwukuma uqine phakathi kwezinhlupheko. Namuhla, abantu abaningi bakholwa ukuthi ukulandela uNkulunkulu kulula, kodwa lapho umsebenzi kaNkulunkulu sewuzophela, uzoyazi incazelo yangempela “yokulandela.” Ngoba nje usakwazi ukulandela uNkulunkulu namuhla emuva kokunqotshwa, lokhu akufakazeli ukuthi ungomunye walabo abazopheliswa. Labo abangakwazi ukubekezelela izilingo, abangakwazi ukunqoba phakathi kwezinhlupho, ekugcineni, ngeke bakwazi ukuma, futhi ngeke bakwazi ukulandela uNkulunkulu kuze kube sekugcineni. Labo abalandela uNkulunkulu ngokweqiniso bakwazi ukubekezela lapho umsebenzi wabo uvivinywa, kanti labo abangamlandeli ngokweqiniso uNkulunkulu abakwazi ukumela ukuvivinywa uNkulunkulu. Bayoxoshwa kungekudala, kanti abanqobi bayohlala embusweni. Ukuthi ngabe umuntu ufuna uNkulunkulu ngokweqiniso kunqunywa ukuvivinywa komsebenzi wakhe, okuwukuthi, kwenzeka ngokuvivinywa uNkulunkulu, futhi akuhlangene nhlobo nezinqumo umuntu azithathela zona. UNkulunkulu akamchithi noma kanjani nje umuntu; konke akwenzayo kwenza umuntu akholwe ngokweqiniso. Akenzi lutho olungabonakali kumuntu, noma umsebenzi ongeke umenze umuntu akholwe. Ukuthi ukukholwa komuntu kuyiqiniso noma cha kufakazelwa ngamaqiniso, kungenqunywe umuntu. Ukuthi “ukolweni ungenziwe ukhula, futhi ukhula lungenziwe ukolweni” akungatshazwa. Bonke labo abamthanda ngokweqiniso uNkulunkulu bazohlala embusweni, futhi uNkulunkulu akazukuphatha muntu kabi uma emthanda ngempela uNkulunkulu. Ngokususela emisebenzini nobufakazi obahlukene, abanqobi abasembusweni bayosebenza njengabaphristi noma abalandeli, futhi labo abanqobayo ezinhluphekweni bayoba yisigungu sabaphristi embusweni. Isigungu sabaphristi siyokwakhiwa uma umsebenzi wevangeli usuphelile emhlabeni jikelele. Uma sekufika isikhathi, okumele kwenziwe umuntu kuyoba umsebenzi wakhe embusweni kaNkulunkulu, kanye nokuhlala kwakhe ndawonye noNkulunkulu embusweni. Esigungwini sabaphristi kuyoba nomphristi omkhulu kanye nabaphristi, futhi abasele bayoba amadodana kanye nabantu baNkulunkulu. Konke lokhu kuyonqunywa ngokobufakazi babo kuNkulunkulu ngezinkathi zenhlupheko; akuwona amagama anikezwa kalula nje. Uma isithunzi somuntu sesitholakele, umsebenzi kaNkulunkulu uyophela, ngoba umuntu ngamunye uyobe esebekwe ngokohlobo lwakhe futhi ebuyiselwe esimweni sakhe sasekuqaleni, futhi lokhu kuwuphawu lokuqedwa komsebenzi kaNkulunkulu, lokhu kuwumphumela wokugcina womsebenzi kaNkulunkulu kanye nokwenza komuntu, futhi kuwukucaciswa kwesimo kwemibono yomsebenzi kaNkulunkulu kanye nokusebenzisana nomuntu. Ekugcineni, umuntu uyophumula embusweni kaNkulunkulu, futhi noNkulunkulu, uyokwenza njalo, uyobuyela endaweni Yakhe ukuze aphumule. Lokhu kuwumphumela wokugcina weminyaka eyizi-6000 yokusebenzisana phakathi kukaNkulunkulu nomuntu.
Ngike ngenza umsebenzi omkhulu phakathi kwabantu, kodwa abazange babone, ngakho kwadingeka ngisebenzise izwi Lami ukuze ngiwembule kubo....